Shiinaha warshad budada mica Pearlescent iyo alaab-qeybiyeyaasha | Huajing
Huajing pearlecent mica powder wuxuu ka samaysan yahay wasakhda mica wafer ee la soo xulay oo ka duwan tan caadiga ah ee fluorophlogopite. Sababtoo ah waa mica synthetic cusub iyadoo la adeegsanayo Huajing formula qaas ah iyo qalab wax soo saar si loo soo saaro.
Pearl Grade mica budada
Shayga Qeexitaanka gudaha midab caddaan (Shaybaar) cabbirka walxaha D90 (μm) cabbirka walxaha D50 (μm) cabbirka walxaha D10 (μm) Codsi
-15 -15μm Caddaan 98 12 ～ 15 5 7 2 ～ 4 Taxane Siver
5 ～ 25 5-25μm Caddaan 98 22 ～ 25 10 ～ 13 5 7 Taxane qalin
10 ～ 40 10-40μm Caddaan 98 40 ～ 42 21 ～ 24 10 ～ 12 Taxane qalin Taxane sixir Taxanaha Chameleon
10 ～ 60 10-60μm Caddaan 98 49 ～ 52 25 ～ 28 12 ～ 14 Taxane qalin Taxane sixir Taxanaha Chameleon
20-120 20-120μm Caddaan 98 108 ～ 113 58 ～ 60 25 ～ 27 Taxane qalin
40 ～ 200 40-200μm Caddaan 98 192 ～ 203 107 ～ 110 49 ～ 52 Taxane sixir Taxanaha Chameleon
60 ～ 300 60-300μm Caddaan 98 290 ～ 302 160 ～ 165 73 ～ 76 Taxane sixir Taxanaha Chameleon
Caabbinta kuleylka midab Adkaanta Mohs adkeysi mugga adkeysiga dusha sare (Ω) Barta dhalaalida xoog daloolin Caddaan Foorarsiga
Waxay leedahay astaamaha jilicsan, hufan iyo hooseeya ee fluorine. Maqaar-wadeyaasha ayaa iyaguna maraya hababka soo-saarka soo socda: xulashada gaarka ah, nadiifinta meertada ah, shiidiinta taxaddar leh, qoondaynta ultrasonic patent-ka iyo qallajinta heerkulka oo hooseeya .Hadalladan ayaa isku koobay teknoolojiyad badan oo horumarsan oo wax soo saarka mica ah 30kii sano ee la soo dhaafay. Markaa budada mica ee ugu dambeysa waxay leedahay faa iidooyinka cabirka walxaha isku midka ah, qaabdhismeedka wafer kaamil ah iyo dhumucda dhexroor aad u sareeya. Huajing budada mica synthetic ayaa ah xulashada ugu fiican ee taxanaha luul taxanaha luul, taxanaha magica iyo taxanaha chameleon.
Intaa waxaa dheer, Huajing mica synthetic dhammaantood waa la habeeyay iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, cabirku wuxuu u dhexeeyaa 10 ～ 900μm.
Maxay Yihiin Saddexda Qaybood Ee Ugu Muhiimsan Pearlescent Pigments?
Midabka pear-ka warshadaha, midabada la isku qurxiyo ee pearlescent, cuntooyinka kala duwan ee loo yaqaan luul
Meelaha Pearlescent Industrial
Midabada waa mid aad u hodan ah, oo ay ku jiraan: midabka saamaynta luul classical, midabbada saamaynta luul crystal, midabyada saamaynta biraha aluminium midab, waxqabadka sare ee saamaynta pearlescent saamaynta, midab multi saameyn midab kala duwan, midab dareere ah biraha saamaynta biraha, midabaynta midab galaas midab leh. ., Si ballaadhan loogu isticmaalay dahaadhka, balaastigga, daabacaadda, dhalooyinka iyo dhoobada.
Si loo daboolo baahiyaha suuqa, waxaan hiigsaneynaa hagaajinta hal-abuurka macaamiisha ee horumarinta waxqabadka ee midabada pearlescent-ka si looga caawiyo soosaarayaasha midabaynta luul inay xalliyaan caqabadaha kala duwan ee codsiyada suuqa. Sida: gacan ka geysashada horumarinta heerar kala duwan oo ah midabbo saameyn ku yeelanaya jawiga u adkaysta cimilada, si dhammaystiran u xallisa jawiga qalafsan ee ay la soo dersaan baabuurta iyo caagagga dibadda; Midabaynta saamaynta luul-bilaa-boodhka ayaa xallisa dhibaatooyinka wasakhda wasakhda iyo kala-firdhinta iyo faaruqinta midabbada luul ee daabacaadda; Midab-casaan ka-hortagga huruudda ah ayaa xalliya dhibaatooyinka midab-madoobaadka iyo qorrax-casarka ee caagga ah Habka daaweynta midabbada gaarka ah waxay dabooshaa baahiyaha waxsoosaarka sare iyo dheellitirka midabka sare ee soo saarista maqaarka mastarista midabka caagga ah.
Si buuxda u adeegsiga khibradeena ku saabsan soo saarista mica synthetic, waxaan sii wadeynaa furitaanka aagag cusub oo ah midabka midabka. Tusaale ahaan, alaabooyinka codsi heerkulka sare waxay ka dhigayaan midabbo midabbo caabbinta tijaabada heerkulka sare ee dhalooyinka iyo codsiyada dhoobada iyadoo la ilaalinayo xasilloonida midabka ee midabbada.
Midabka Pearlescent Cosmetic
Iyada oo horumarka joogtada ah ee warshadaha la isku qurxiyo, saameynta iyo muuqaalka alaabta ay keeneen midabada pear-ka ayaa aad iyo aad looga sii maarmayaa. Waxyaabaha la isku qurxiyo waxay ka samaysan yihiin midabbo luul ah ama jilicsan sida dhalaalka satin-u-eg, ama u dhalaalaya sida dheeman. Si loo kordhiyo soo jiidashada badeecada, alaabada daryeelka shakhsiyadeed waxay sidoo kale bilaabeen inay isticmaalaan midabbo luul si loo hagaajiyo muuqaalka alaabta ama loo abuuro saamaynta degdegga ah ee alaabada.
Midabada Pearlescent ee loo isticmaalo soo saarista waxyaabaha la isku qurxiyo waa in lagu nadiifiyaa heerkulka sarreeya oo dhammaan khadka wax soo saarku waa inuu noqdaa aseptic.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro luul tayo sare leh oo midabkeedu yahay faragalin midab dhalanteed ah, taas oo aan ku soo kordhin kareynin wax dhalaalaya oo dhalaalaya badeecooyinka, laakiin sidoo kale si xirfad leh u qabanaya iftiinka si loo abuuro midabbo kala duwan oo luul ah adoo adeegsanaya mabda'a faragelinta.
Waxaa loo adeegsaday soosaarka taxanaha chameleon, oo loo rinjiyeeyay sida jibbiil, iyadoo loo marayo xaglo kala duwan oo daawasho ah, waxaad arki kartaa isbeddelka midabka waayo-aragnimada.
Cunnada Fasalka Cawilka
Waxa loogu yeero cuntada macaan ayaa had iyo jeer ka buuxa midab iyo dhadhan, iyo waayo aragnimada raaxada leh ee muuqaalka ah ayaa had iyo jeer la socota waqti qurux badan. Ku dar badeecadaada
Midabaynta saamaynta luul, laga bilaabo qalinka, dahabka iyo saamaynta faragelinta, illaa midabada casaanka iyo buniga ah si loo abuuro midabyo hufan iyo qurux raaxo leh, aynu isla aragno dhadhanka dhalaalaya! Baadhitaan ku samee adduunyada mice-ka heer-cunto ah!
Hore: Shirkadaha wax soosaarka ee Muscovite ee Toy aan sun lahayn oo dhadhamin lahayn - Calcined mica powder - Huajing
Mica Peal Pecent Pearlescent
Miisaanka 'Pearlescent Mica'